YAADAANNOO WAGGAA TOKKOFFAA FINCILA DIDDAA GABRUMMAA
SADAASA 9 BARA 2006
KOREE KUTAA ABO-USA
Oromonni erga oromiyaan waanjo garbrummaa jalatti kuftee yeroon isaani garbumaa fudhataan ta’aan hinturee. Yeroo adda addatitti, bakka adda addatitti ficilaa fi diddaa godhanijiruu. Sochii Oromoota walloo; sochii Oromoota dhihaa; shochii oromotaa Balee, sochii waldayaa Macaa fi Tulamaa, fi akasumaa sochiin Oromoonni hanga nama tokke’een batuuti godhaan seenaa sochii ummaanni Oromoo bilisummaaf godhee keessaatti yadatamaati jirata.
Fincilii Diddaa Gabrummaa umaanni Oromoo motummaa wxgayaanee irratti godhaa jiruu qamaa sochii oromonni godhaa turaaniifi ammalee itti jiraan keessaa tokko.
Fincila Diddaa Garbummaa ka aridhaa waggaa tokkoffaa isaa kabajinu kana waan addaa isaa godhuutuu jiraa. Inillee ilmaan Oromoo kabaa kibbaatti, bahaa dhihatti woliin ta’aan afaan tokkoon abbaa biyyumaa isaanitiif sochii walifakatuu godhuu isaanitti.
Waggaa tokkoffaa Fincilla Diddaa Garbumaa yoo kabajinnu wereegaminni barattonnii Oromoo bilisummaa saba isaantiif kafalaan bakka ol -annaa qaba. Barattoonni Oromoo Fincila Diddaa Garbrummaa kalati’iin ittin hirmaatuun dhiiga isaanitiin seenaa galmeesaan jiruu. Galannii keessaan Bilisummaa Oromiyaati jennaa.Seenaan isin hojjataan qabsoo ummanni Oromoo bilisummaa saba isaatiif godhuu keessatti yeroo hundaa yaadatamaa jiraata.
Waggaa tokkoffaa ficnilii diddaa garbummaa jalqabee sababa godhuun Kutaan USA keessatti miseensonni dhaaba, deegartoonni dhaabaa tiif hawaasinni Oromoo Sadaasa 9 bara 2006 haala addatiin kabajee olee jira:
1ffaa guyyaa kana midhaaniif bishaani lagatee olee jiraa;
2ffaa, mindaa guyyaa kana argatu qabsoo bilisummaa gootonni ilmaan Oromoo itti wereegamaanitiif akka oluu murtteesee jiraa, fi 3ffaa, namooleen mindaa hinqabinee ammoo waan guyyaa kana cireef, bunaaf, laaqana fi irribtaaf basaan gara qasoo gootonni ilmaan Oromoo itti jiraaniif akka oluu murteesaaniru.
Miseeonni, deegartonnii fi hawaasiin Kutaa USA keessaa jiraan maqaa Kutaa USAtiin dhiginni ilmaan Oromoo mootummoota garbofatootaa woliin osoo falmaani jiggee , dhigaa bilisummaa Oromoo biqilichee malee dhigaa tasati jiggee miti jenna. Galaannii keessaan bilisummaa oromiyyaati jenna. Dhiinni keessaa mootummaa garbonfattuu Tigree xururee biyyaa keenna keessaa ka basuu yoo ta’uu, ilmaan Oromoo ammo seenaa isiin hojjataanitti akka boonaan gotaanijirtuu. Karaan isin irraatti kuftaan kara haqaa waan ta’eef ilmaan Oromoo kumaataamaan wereegamuuf akka qophayaan gotaanijirtu. Bilisummaa yookaan du’aa jedhaani ka’aanii jiru. Qabsoon isin irratti kuftaan, gatiin dhigaa keessaan Bilisummaa Oromiyaati jenna. The price of freedom is death (Malcolm X) gaatiin bilisummaa du’aa. Give me liberty or give me death (Patrick Henery). Bilisummaa ykn du’aa. Qabsawaan ni kufaa qabsoo itti fufa.
Oromiyyaan dhiga ilmaan isitiin bilisoomitti !!
Gadaan Gadaa Bilisummaa ti !!
Oromiyaan Dhigaa Ilmaan isi’iintiin Bilisoomiti !!
Koree Kutaa ABO